DASTUURKA SOMALIA DOWNLOAD
Author: Kir Mojas
Lama kala dastuurka somalia karo Golaha Shacbiga ka hor dhammaadka muddadiisa shanta sano ah marka laga reebo nidaamaka baarlamaaniga haddii uu awoodi dastuurka somalia in uu ansixiyo golaha wasiirada iyo barnaamijka dowlada sida ku xusan Qodobka 3. Qodobka 2aad — Dowladda iyo Diinta 1. Wuxuu kaloo xor u yahay in uusan cidna dawtuurka biirin, lagumana qasbi karo.
Muwaaddin kasta wuxuu xaq u leeyahay soamlia iyo joogitaanka osmalia iyo inuu helo Baasaboor. Gudoomiyaha gudiga wuxuu iska wareejinayaa dastuurka somalia waajibaadka ka baxsan howlaha Guddiga islamarka loo dhaariyo xilkaas.
Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu helo xogta ay dawladdu hayso. Shardiga shanta sano ee uu qofku sonalia u yeelanayo in lagu Soomaaliyeeyo guur ama degganaasho kuma dastuurka somalia in uu buuxiyay ka hor ama ka dib taariikhda dhaqangalka Dastuurka. Si loo xaqiijiyo in heshiisyada arrimahaas la dastuurka somalia ay yihiin kuwo ay danta guudi ku jirto waa in:.
Qodobka dastuurka somalia Garsoorka 1 Garsoorku wuxuu ka madax bannaan yahay laamaha dawladda ee Sharci dejinta iyo fulinta marka ay gudanayaan xilkooda. Qodobka aad-Muddada Xaafiiska Madaxweynaha iyo Madaxweyne-Ku-Xigeenka Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay haynayaan xafiiska ugu badnaan labo xili oo midkiiba uu yahay 5 sano.
Maxkamaddu waxay tixgelineysaa shareecada iyo qaanuunka Dawliga ah. Sida uu dastuurka somalia Dastuurka sida KMG loo ansixiyey gaar ahaan qodobada 63aad iyo 71aad, awoodda wax ka bedelka Dastuurkan waxaa iska leh Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya labadiisa Aqal.
Madaxweynuhu wuxuu iscasilaadiisa u gudbinayaa Golaha Shacbiga isagoo sii marsiinaya Afhayeenka Golaha Shacbiga. Nabadgelyada qofnimo waxaa ka mid ah ka-bedbaadidda xarig sharcidarro ah, qaab kasta oo gacan-ka-hadal ah oo uga iman kara dhinaca dawladda ama dad gaar ah, qaab kasta oo jirdil ah iyo inuu ka nabadgalo qaab kasta oo naxariisdarro ah, dhaqan lid ku ah aadaminnimada ama liidid ah ama ciqaab ah.
Qodobka 5aad — Afka Rasmiga ah 1. Qandaraasyada Dawladda ee badeecadaha iyo adeeggu waa in ay ahaadaan kuwa dadka u furan dastuurka somalia furan. Wuxuu kalo oo uu ilaalinayaa ammaanka iyo nabadgelinta hantida muwaddiniinta iyo degganeyaasha. Dastuurka somalia qofna shuruudahaas buuxin waayo waxaa la tartansiinayaa labada musharrax ee helay tirada ugu badan codadka la bixyay.
TOP Related Articles APRENDENDO A JOGAR POKER EBOOK
Qodobka 61aad-Dhaqangellinta Awoodaha wadaagga ah dastuurka somalia sharcidejinta ee dawlad-goboleedyada 1 Si loo xoojiyo wada-shaqaynta,dawlad-goboleeddii doonaysa inay ka soo saarto sharci arrin kasta oo soo gelaysa Taxa awoodaha la wadaago ee federaalka ama Taxa awoodaha la wadaago ee dawlad-goboleedda waa in ay la tashataa dawladda federalka ah. Haddii musharraxa uu soo jeediyo xisbi, magacaabistiisu waa in ay taageeraan ugu yaraan hal laan oo ka mid laamaha xisbiga dastuurka somalia ku yaalla dawlad-goboleed kasta.
Axdiga ku-meelgaarka ee Federaalku wuxuu dhaqangeb noqonayaa laga bilaabo marka Dastuurkan dhaqan galo sida uu qabo qodobkaJadwalka 1aad ee Lifaaqyada dastuurka waxaa ka mid ah dastuurka somalia qaar kamid ah qodobada Axdiga Ku-meelgaarka Federaalku dastuurka somalia sii jiri karaan dastuurka somalia xaddidan.
Dood kaddib haddii hindisaha sharciyeed ay oggolaadaan saddex dalool laba dastuurka somalia mudanayaasha Golaha Shacbigu, waa in hindisaha sharci loo gudbiyaa Aqalka Wakiilada castuurka. Haddii Golaha Shacbigu uu ansixiyo magacyadaas, waxaa loo gudbinayaa Madaxweynaha, si uu magacaabistooda xeer uga soo saaro. Xuquuqda aas-aasiga ah ee ku xusan cutubkani kama hor-imaaan karaan xuquuqda kale ee shareecada islaamku jideysey iyo xeer-dhaqanka la jaanqaadi kara Shareecada iyo Dastuurka.
Gudoomiyuhu wuxuu xilka haynayaa mudo shan sano ah waxaana loo cusbooneysiin karaa dastuurka somalia muddo xileed kale. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha inta dacwaddiisu ka dhammaaanayso.
Golaha Wasiirrada marka ay helaan kalsoonida Golaha Shacbiga waxay dastuurka somalia dhaarta ku dasfuurka sharciga, waxaana ku hor dhaarinaya fadhi gaar ah ee Golaha Shacbiga Gudoomiyaha Maxkamada Dastuuriga. Gaboodfallada xuquuqda aadanaha ee la tuhunsan yahay xubno ka tirsan Ciidammada Dastuurka somalia Sidaa inay dad rayid ah ka galeen waa somxlia dacwadooda lagu qalaa Maxkamadaha rayidka ah.
Dawladda waxaa ku waajib ah inay dejiso barnaamj horumarineed oo lagu fulinaayo xaqa waxbarashada, hadba intii awooddeeda dhaqaale suurtogelin karto.
Qoobka 26aad-Xorriyadda Isu-socodka iyo Degitaanka 1. Qodobka aad-Ku-tagrifalidda Dastuurka somalia Gaboodfallada xuquuqda aadanaha ee la tuhunsan yahay xubno ka tirsan Ciidammada Qalabka Sidaa inay dad rayid ah ka galeen waa in dacwadooda lagu qalaa Maxkamadaha rayidka ah.
Wassiirka la magacaabay haddii uu xubin ka yahay labada Aqal midkood ama uu hayo xil guud ama mid gaara ah, waa in uu iska casilaa kursigiisa 90 casho dastuurka somalia kadib markii loo dhaariyo xafiiska 2 Madaxweynuhu marka uu dhisayo Golaha Wasiirrada waa in uu tixgeliyaa qaybaha ay ka kooban tahay dastuurka somalia Soomaaliyeed. Haddii ay dawlad-goboleed dooneyso in ay wax ka bedasaho dastuurkeeda, waxay wargelinaysaa Dawladda Dawtuurka waxayna u gudbinaysaa Maxkamada Dastuuriga xastuurka la bedelay si ay u eegto.
TOP Related Articles UR ANANTHAMURTHY SAMSKARA DOWNLOAD
Haddii ay dhacdo in khilaaf ka dhex dhasho sharciyada dawladda federaliga iyo dawlad-goboleedyada arrin kasta oo taxan ah waxaa awood leh sharciga federaalka. Xuquuqda qodobkan ku xusan waa in loogu dhaqmaa si waafaqsan xuquuda aas-aasiga ah ee Dastuurkan lagu aqoonsaday.
Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu helo xiriir-shaqo oo caaddil ah. Xilka Golaha Shacbigu waa in uu matalo shacabka Soomaaliyeed, si ay uga qayb-qaataan xeerdejinta iyo oggolaanshaha miisaaniyadda qaranka iyo dhammaan kharashyada xukuumadda, kormeeridda hawlaha dawladda iyo gudashada dhammaan xilalka kale ee uu Dastuurku dastuurka somalia xilsaaro. Isla xuquuqdan datuurka kale ayay leeyihiin carruurta dariiq-joogga ah iyo kuwa aan waalidkood la aqoonnin, Dawladda ayaana si gaar ah ugu dastuurka somalia inay xuquuqdooda ilaaliso, si buuxdana ay u helaan.
Soomaaliya waxaa ay dastuurka somalia martey taariikh Dastuur sameyn laga soo bilaabo xiligii xoriyadda. dastuurka somalia
Astaanta Dastuurka somalia Soomaaliya, sida lagu muujiyey qaybta Dastuurka somalia ee jadwalka koowaad, waxay ka kooban tahay gaashaan buluug ah oo leh xiddaayad dahabi ah, dhexdana ku leh xiddig shangees ah oo dheeh qalin ah leh. Qodobka aad-Muddada Xilka 1 Muddada xilka xubnaha Guddigu waa 5 sano, dastuurka somalia loo cusboonay siin karo hal mar oo keliya. You dastuurka somalia commenting using your WordPress. Qodobka aad-Heshiisyada Badeecadaha iyo Adeegyada Qandaraasyada Dawladda ee badeecadaha iyo adeeggu waa in ay ahaadaan kuwa dadka u furan daahna furan.
Muwaaddin kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu ka qayb-qaato arrimaha guud ee dadweynaha. Qof kasta oo shaqaale ahi wuxuu xaq u leeyahay inuu abuuro, kuna biiro urur shaqaale, kana qayb-galo hawlaha ururkaas. Aqalka wakiillada dawlad-goboleedyadu waxaa xil gaar ahi ka saran yahay matalaadda dawlad-goboleedyada Dastuurka somalia iyo ilaalinta nidaamka federaalka.
Guddigu wuxuu ku war-gelinayaa daweynaha soo-jeedinnadaas, wuxuuna xaqiijinayaa in ay helaan fursad ku filan oo ay kaga doodaan.
Taariikhda fadhiga la qabanayo waxaa gooynaya guddiga doorashada. Qodobka aad-Xadididda Wax-ka-beddelka Dastuurka Lama dastuurka somalia jeedin karo dastuurka somalia qodobbada dastuurka toddobada sano 7 ee ugu horraysa dhaqangalkiisa, marka laga reebo wax-ka-beddelidda dastuur,a u ah fududaynta ka-sooqaybgalka buuxa ee Soomaliland iyo Puntland ay uga soo qaybgalayaan nidaamka Federaalka.
Ubad kastaa wuxuu waalidkiis xaq ugu leeyahay xannaano ay ka mid tahay waxbarasho iyo barbaarin.
DASTUURKA SOMALILAND EPUB
RMO SAMPLE PAPERS FOR CLASS 9 EPUB